Jul 12, 2018 01:30:06
ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသလား..? နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ အရိုးအဆစ်မြစ်တွေ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပါသလား..? အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေအားလုံး ယူပစ်သလို ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်တတ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြရင် ဆရာဝန်တွေ အားလုံးက ဒီပြဿနာဟာ အနေအထိုင် ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်ကန်လို့ ဖြစ်တာ၊ ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုထိုင် စသည်ဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ သက်သာစေမယ့် ဆေးတွေပေးကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဆေးတွေက ခဏတော့ သက်သာစေမှာပါ။
ရေရှည်မှာ ဒီလိုဝေဒနာတွေ ကင်းရှင်းသွားဖို့အတွက် မိမိရဲ့ အိမ်မှာပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် ဆေးနည်းလေး ပေးလိုက်ပါရစေ။ (လွယ်လွန်းလို့ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့)
ဒီဆေးနည်းမှာ အဓိက လိုအပ်တာကတော့ “ကျောက်ကျောမှုန့်” ပါ။ ကျောက်ကျောမှုန့် ဆိုပေမယ့် ခါတိုင်း ကျောက်ကျောထိုးဖို့အတွက် ဝယ်နေကျ ဓာတုဗေဒ ကျောက်ကျောမှုန့်မျိုးနဲ့တော့ မရပါဘူး။
သဘာဝ “အော်ဂန်းနစ်ကျောက်ကျောမှုန့်” ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို “Gelatin Powder” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စူပါမားကတ်တွေမှာ ရှာဝယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
(ဖော်ပြပါ ပုံတွေထဲကအတိုင်း Organic Gelatin Powder လို့ ရေးထားရင် ရပါတယ်)
ညမအိပ်မီ “Gelatin Powder” ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ခွက်ထဲကိုထည့် ပြီးနောက် ရေအေးအေး ၅၀ မီလီမီတာနဲ့ ရောသမအောင် မွှေပြီး အခန်းအပူချိန်မှာပဲ တစ်ညလုံး ခဲထားပေးပါ။
နောက်တစ်နေ့ နံနက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဂျယ်လီကျောက်ကျောတုံး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကျောက်ကျောတုံးကို (မိမိစိတ်ကြိုက်) အသီးဖျော်ရည် တစ်မျိုးမျိုး၊ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ် စသည်တို့နဲ့ဖြစ်စေ၊ ဒီတိုင်းဖြစ်စေ မနက်စာ စားတဲ့အခါ သင့်တော်သလို ထည့်စားပေးပါ။
ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအတိုင်း တစ်ပတ်တိတိ လိုက်နာစာသုံးကြည့်ပါ။ ခါးနာတာတွေ အရိုးအဆစ်ကိုက်တာတွေ သိသိသာသာ သက်သာလာတာကို ခံစားရပါမယ်။
၁ လ ဆက်တိုက် ဆက်စားကြည့်မယ်ဆိုရင် ခါးနာတာ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်တာ လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုရင် စားသုံးတာကို ရပ်လို့ရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် အကြံပြုချင်တာကတော့ နောက်ထပ် ၁ လနေရင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ဖော်ပြပါအတိုင်း ထပ်ပြီးစားသုံးပါ။ တတိယအကြိမ်အဖြစ် နောက်ထပ် ၆ လနေမှ ထပ်မံစားသုံးဖို့လိုပါတယ်။
ကျောက်ကျောမှုန့်က ဘာကြောင့် သက်သာစေရသလဲ..?
အော်ဂန်းနစ် သဘာဝကျောက်ကျောမှုန့်တွေဟာ တရိစ္ဆာန်သတ္တဝါအကြီးမျိုးတွေရဲ့ အရိုး၊ အရိုးနုနဲ့ တစ်ရှုးတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝကျောက်ကျောမှုန့်တွေထဲမှာ အရိုးအဆစ်တွေကို အားပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ ပရိုလိုင်းနဲ့ ဟိုက်ဒရိုဆီပရိုလိုင်းတို့ အပြည့်အဝ ပါဝင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဟာရဓာတ်တွေဟာ အရိုးနဲ့ အဆစ်မြစ်တစ်ရှုးတွေကို သန်မာစေတဲ့အတွက် ခါးနာ၊ အဆစ်မြစ်နာတာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်း စေတာဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးအဆစ်တွေဟာ အချိန်နဲ့အမျှ အသုံးပြုနေတာမို့ လိုအပ်တဲ့ အဟာရကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းဖို့ ဝေဒနာရဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းမှုအပေါ် မူတည်ကာ လပိုင်း ခြားခြားပြီး စားသုံးခြင်းဖြင့် အပြီးတိုင် ပျောက်ကင်းချမ်းသာစေပါတယ်။